Samachar Batika || News from Nepal » ‘मुन्नी’को सुन्दरता’ १२ तस्बिरमा हेर्नुहोस् ! (फोटो फिचर)
‘मुन्नी’को सुन्दरता’ १२ तस्बिरमा हेर्नुहोस् ! (फोटो फिचर)
हाँस्य टेली श्रृङ्खला ‘भद्रगोल’ बाट एकाएक चर्चा कमाएकी मोडल हुन्- प्रियाना आचार्य ‘मुन्नी’ ।
‘भद्रगोल’ हेर्न्र जो-कोहिको लागि सु-परिचित नाम हो- ‘मुन्नी’ ।
उनी पछिल्लो समय प्रियाना भन्दा पनि ‘मुन्नी’ को उप-नामले भाइरल भएकी छिन् ।
मुन्नी एक थिएटर कलाकार हुन् । उनका थुप्रै नाटक अभिनय गरेकी छिन् ।
उनले अहिले हाँस्य टेली श्रृङ्खला ‘भद्रगोल’ कै टिमसँग ‘सक्किगोनि’ मा काम रहेकी छिन् । आखिर को हुन त ‘मुन्नी’ ? हाँस्य टेली श्रृङ्खला भद्रगोल’ मा एक मधेस कमिनिटीकी छोरीको भूमिका निर्भा गरेकी छिन् ।
‘मुन्नी’ भनेको मधेसमा आफ्नो छोरीलाई मायाले भने गर्दछन । ‘मुन्नी’नामबाट उनले करोडौँ दर्शकको मन जित्न सफल भएकी छिन् । पछिल्लो समय उनको फ्यान फ्लोर निकै चुलिएको छ ।
उनी हाँस्य टेली श्रृङ्खला बाहेक म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गर्दछन् । उनले अभिनय गरेका भिडियो ‘सरिम लाउने’ ‘कालो कोठी’ लगायत गीतमा अभिनय गरेकी छिन् ।
‘मुन्नी’ भने बित्तिकै ‘लजालु’ मधेस कमिनिटीको र अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने मोडले सम्झिन छन् । उनी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भएकी हुन्छिन् सँगै उनको सुन्दरता र एक्टिंगको पनि चर्चा हुन्ने गरेको छ ।
हेर्नुहोस फोटो फिचर:
मुन्नी’ भनेको मधेसमा आफ्नो छोरीलाई मायाले भने गर्दछन । ‘मुन्नी’नामबाट उनले करोडौँ दर्शकको मन जित्न सफल भएकी छिन् । पछिल्लो समय उनको फ्यान फ्लोर निकै चुलिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस: आन्टी भएर हराउन्न, नायिका रेखा थापा……….
रेखा थापा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकि एक चर्चित अभिनेत्री र तथा र्निमात्री हुन् । सन् १९९९ मिस नेपालमा सहभागी भएर उनी उत्कृष्ट दस मा पर्न सफल भएकी थिइन् । २ वर्ष पछि उनले छबी राज ओझाको चलचित्र हिरोबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । हालसम्म उनले २०० वटा भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् ।
सन् २०१० र २०११ मा उनले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको सिजी डिजिटल फिल्म पुरस्कार पाएकी थिइन् र सन् २०११ मा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको नेफ्टा फिल्म पुरस्कार जितेकी थिइन् । नायिका रेखा थापाले आफू फिट रहन नसकेर चाडै नै नहराउने बताएकी छिन् । पछिल्लो समय प्रदर्शनमा आएका केही चलचित्रमा रेखाको फिगरलाई लिएर चर्को आलोचना भएको थियो ।
चलचित्र हिम्मतवाली र तथास्तुमा रेखाको अस्वभाविक मोटो शरीरलाई समिक्षकहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए । अहिले यी चलचित्र हेर्दा आफूले आफूलाई कुनै ध्यान नदिएको लाग्ने गरेको भन्दै रेखाले अब पूर्ण रुपमा पुरानी रेखा हुने बताइन् । चलचित्र हिरोमा डेब्यू गर्दा आफ्नो जस्तै फिगर थियो त्यस्तै बनाउने रेखाको भनाई छ ।
यसका लागि उनले ट्रेनर नै राखेर दैनिक जिम गरिरहेको बताइन् । अमेरिकामा रहँदा आफूले करिब १ महिना जिम गरेको भन्दै उनले नेपालमा आएर पनि यसलाई निरन्तरता दिएको बताएकी छिन् । चलचित्र रामप्यारीको छायांकनमा ५ केजी भन्दा बढी घटेपछि रेखाको लुक्स पनि फेरिएको थियो ।उनले भनिन्-नायिकाहरु फिट रहन नसकेर चाडै नै नायिकाको भूमिकाबाट आमा र आन्टीको भूमिकामा देखिन्छन् ।
म आन्टी भएर हराउदिन । नायिका रेखा थापालाई हराउन दिन्न । उनले आफूले लाप’रवाही गरेका कारण पनि मेन्टेन गर्न नसकेको बताएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति ७ बैशाख २०७८, मंगलवार १४:१५
यी हुन “संसारकै सबैभन्दा अचम्मका २० बिबाह”(हेर्नुहोस भिडियो सहित)
अमरीश पुरीको यस्तो रिस
पढाइ खर्च जुटाउन नसकेपछि १८ वर्षीय यि युवतिले गरिन यस्तो हर्कत,
अध्ययन भन्छ: लभ परे पछि यी १० कुराहरु हुन्छन् ,तपाईको नी ?
भनेको नमान्दा पतिमाथि उम्लेको पानी खन्याइन् पत्नीले !
४ वर्षको छोरालाई होटलमा छाडेर देश छोडीन् श्वेताले, पूर्वपतिले श्वेताका यस्ता कर्तुतहरु खोल्दै दिए प्रहरीमा उजुरी
आज सुन्दरी नायिका सुहाना थापाको जन्मदिन,कति बर्ष पुगिन त ? (फोटो फिचर)
यि चर्चित कलाकारले १५० रुपैयामा गरे बिबाह, बिबाहको खर्च कोरोनाका बिरामीलाई दिने ..(फोटो फिचर)
सन्नी लियोनीले दिल्लीका १० हजार प्रबासी मजदुरलाई खाना खुवाइन्, भन्छिन् यो कामको म निरन्तरता दिइरहन्छु (फोटो फिचर)
इन्द्रेणीकी गायिका खिमा रोका मगर वैवाहिक जीवनमा बाधिएकी छिन् (फोटो फिचर)
यी हुन बलिउडका सबैभन्दा महँगा ७ आ’इटम गर्लः लिन्छन् नसोचेको पारिश्रमिक ! (फोटो फिचर)
१० तस्विरमा हेर्नुहोस् ‘समर लभ’की सायाको बो’ल्ड अवतार [फोटो फिचर]
बिल गेट्सले प्रेमिकालाई लिएर मेलिन्डासँग राखेका थिए यस्ता शर्त
रश्मि देशाईका बोल्ड / से’क्सी १० तस्वीर हेर्नुहाेस (फोटोफिचर)
© 2018 - सर्वाधिकार सुरक्षित @ samacharbatika.com